Xinhua Myanmar - ဘိုင်ဒန်အစိုးရအဖွဲ့က နယ်စပ်တွင် ကွဲကွာနေသော ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၏ မိသားစုဝင်များကို ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခွင့်ပြုမည်
အမေရိကန်-မက္ကဆီကို နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ် အမေရိကန်ဘက်အခြမ်း ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ် ဆန်ဒီယေဂိုတွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်က အမေရိကန် နယ်စပ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး စစ်ဆေးနေသည်ကိုတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) North America
“ ဒီနိုင်ငံထဲမှာရှိနေသူတွေ သို့မဟုတ် သူတို့ရဲ့မိခင်နိုင်ငံတွေမှာ ရှိနေကြသူတွေ အဲဒီ မိသားစုဝင်တွေကို ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတာပါ ၊ အကယ်၍ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ အထူးသဖြင့် သူတို့ရဲ့ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခွင့်ရဖို့ ကြိုးပမ်းမှု ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲမှာ သူတို့ကို အခွင့်အရေးပေးနိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ သူတို့ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံထဲမှာ ဆက်လက် နေထိုင်ခွင့်ရဖို့နဲ့ မိသားစု လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့ ဥပဒေလမ်းကြောင်းတွေဖော်ထုတ်ပေးရမှာပါ ” ဟု အိမ်ဖြူတော်တွင် ပြုလုပ်သည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ Mayorkas က ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ယခင်အစိုးရလက်ထက်မှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်တစ်ခုလုံး အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်ခဲ့ရတယ်” ဟု Mayorkas က ပြောကြားခဲ့ပြီး ထရမ့်အစိုးရလက်ထက်တွင် ရွှေ့ပြောင်းအခြေချမိသားစုဝင် ထောင်ပေါင်းများစွာ ကွဲကွာခဲ့ရကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
သို့သော် Mayorkas က ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့် အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းရန်လိုအပ်ကြောင်း နှင့် ယခုချိန်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်ရန် မသင့်သေးကြောင်း ၊ ကပ်ရောဂါကြောင့် အမေရိကန်တွင် ခရီးသွားလာခွင့် ကန့်သတ်မှုများရှိနေပြီး ၎င်း၏ဌာနအနေဖြင့် ခိုလှုံခွင့် နှင့် လူသားချင်စာနာမှုဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် လုပ်ငန်းများ ပြီးစီးခြင်းမရှိသေးကြောင်း ဆိုသည်။
နယ်စပ်အကျပ်အတည်း ရှိနိုင် မရှိနိုင် မေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်၍ Mayorkas က မရှိကြောင်း ၊ သို့သော် ဖိအားအပြည့်ရှိသော စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သမ္မတထရမ့်အစိုးရလက်ထက်တွင် အမေရိကန်-မက္ကဆီကို နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်၌ ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ တစ်ကွဲတစ်ပြားဖြစ်ခဲ့ရခြင်းကြောင့် ကလေးငယ်ပေါင်း ၅၀၀ နီးပါသည် မိဘများနှင့်ဝေးကွာခဲ့ရပြီး ယင်းအား ဖြေရှင်းရန် ရှေ့နေများက ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း မီဒီယာများ၏ ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။(Xinhua)
WASHINGTON, March 1 (Xinhua) -- President Joe Biden's administration will allow migrant families separated at the U.S.-Mexico border under former President Donald Trump to reunite inside the United States, Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas said on Monday.
"We are hoping to reunite the families either here or in their country of origin. We hope to be inaposition to give them the election and if in fact they seek to reunite here in the United States, we will explore lawful pathways for them to remain in the United States and to address the family needs," Mayorkas said inaWhite House briefing.
"The prior administration dismantled our nation's immigration system in its entirety," Mayorkas said, calling the separation of thousands of migrant families under the Trump administration "the most powerful and heartbreaking example of the cruelty that preceded this administration."
However, Mayorkas said that migrants need to wait and should not come to the United States now, citing travel restrictions due to the pandemic and his department's unfinished work to rebuild its asylum and humanitarian programs.
Asked whether there'saborder crisis, Mayorkas said no, calling it instead "a stressful challenge."
Lawyers are still trying to locate the parents of nearly 500 children who had been split from their families at the U.S.-Mexico border by the Trump administration, according to media reports.
A U.S. Border Patrol agent stands in front of the border fence that divides the United States and Mexico in San Diego, California, the United States, Nov. 17, 2018. (Xinhua/Zhao Hanrong)
Previous Article အမေရိကန်-မက္ကဆီကိုနယ်စပ်တွင် အမေရိကန်က ထိန်းသိမ်းထားသည့် တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် (၁)သိန်းနီးပါးရှိ
Next Article အမေရိကန် လွှတ်တော်ထဲသို့ အကြမ်းဖက်စီးနင်းဝင်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သံသယရှိသူ (၃၀၀)ကျော် တရားစွဲဆိုခံရ